Shiinaha Linear Motion Shafts warshad iyo soosaarayaasha | Yi Xinyan
Rullaluistemadka Taper dhalista 30200 Taxanaha
Gawaarida Gawaarida Gawaarida / Hubinta Gawaarida Gawaarida Gawaarida DAC
Qaab-socodka Mooshinnada Toosan
Jilicsan, adag, oo xirta u adkaysta, fallaadhihii toosan ee dhaqdhaqaaqa waxay la shaqeeyaan xarriiqyo toosan si loo yareeyo khilaafaadka nidaamyada gacanta iyo otomatiga ah, sida kuwa laga helo xirxirida, qalabka mashiinka, iyo hawlgallada maaraynta qalabka. Dusha sare ee jilicsan ayaa yareynaya khilaafaadka iyo xirashada dusha sare - qiimaha microinch ee usheeda dhexe uu hooseeyo, ayaa sifiican u dhameystirkiisa iyo khilaaf yar oo uu abuuri doono. Dhammaantood waa la rogay, dhul, oo la safeeyey dhexroor cidhiidhi ah iyo dulqaadasho toosan.
Fallaadhaha birta guud ahaan way ka xoog badan yihiin aluminium iyo alwaaxda birta leh laakiin maaha sida daxalka u adkaysta. 1055 iyo 1060 fallaadhihii birta ee kaarboonku waxay dheellitirayaan awood sarre iyo farsamaynta wanaagsan, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku habboon isticmaalka ujeeddada guud. 1566 fallaadhaha birta kaarboonku waxay leeyihiin xoog dhal wax-soo-saar ka sarreeya 1055 iyo 1060 fallaadh bir bir ah oo lagu taageerayo culaysyo culus. 52100 alwaaxda birta daawaha ah ayaa u fiican codsiyada culus. Si kastaba ha noqotee, way ka dhib badan yihiin mashiinka marka loo eego fallaadhaha birta kaarboon.
Fallaadhaha birta ah ee aan xarka lahayn ayaa ka adkeysi badan daxalka marka loo eego birta birta ah; si kastaba ha noqotee, uma adka sida biraha birta oo way ku adkaan karaan mashiinka. 420 ahama iyo 440C fallaadhaha birta aan lahayn waxay leeyihiin iska caabin daxal wanaagsan. Fallaagada leh cidhifyada dusha sare leh waxay leeyihiin geesahooda si ay u yareeyaan dhaawaca soo gaadha, guryaha, iyo qaybaha kale inta lagu jiro rakibidda.
Nidaamka Cabbiraadda Inji metrik
Dhererka 25mm-4521mm 6 "-72"
Waxyaabaha Birta Aluminium ee birta ah
Nooca Dhamaadka Toosan
Finish farsamo Qummanaanta Dhulka Dhulku u Leexday
Nooca Mooshinka Toosan
Qiimaynta Qalafsanaanta Aad u Adag
Adkaanta Rockwell C52 / 56/59/60
Daaweynta kuleylka Dacwada Way Adag Tahay
Nooca Edge Shaafiyay
Dulqaadashada Dhererka (Qoraalka) (-1.2-1.2MM) (-1-1mm) (- 0.8mm-0.8mm) (- 0.5-0.5mm）
Cadho Lama Qiimeyn
DFARS (Kaabista Xeerarka Qaadashada Difaaca) Birta Qaaska ah ee DFARS SARIIR-Ka-dhaaf
Jilicsanaan dusha sare 10microinch 0.2microns 12microinch 0.4microns
Awood Bixin in ka yar 40,000psi 40,000 ilaa 50,999psi
51,000 ilaa 59,999psi 60,000 ilaa 99,999psi
Awoodda Dhulka oogada 140,000 psi
Ballaca 30mm faahfaahinta 300mm
Metric-52100 Daawaha Daawaha
Lg. Lg. Dulqaad, Toosnaan Oogada Nooca Edge Adkaanta Adkaanta Daaweynta kuleylka Keenay
mm mm Dulqaad Jilicsanaan Qiimeynta Xoog, psi
30 mm Dia. (Dulqaad: -0.02 mm ilaa -0.007 mm)
300 -0.5 ilaa 0.5 0.002 "halkii ft. 0.4 mikroono Shaafiyay Aad u Adag Rockwell C60 Dacwada Way Adag Tahay 57,000
· Warshadda laga baxo, tayo sare lehna qiime macquul ah!
· Adeeg aad u fiican kadib-iibinta oo kaa caawiya xalinta dhibaatooyinkaaga.
· Taageero farsamo xirfadeed
· Waqtiga hogaaminta degdega si looga fogaado qiimaha xamuulka ee dheeraadka ah
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad wax baahi qabtid, waxaan hubnaa in codsi kasta uu helayo dareen & jawaab deg deg ah!
Hore: 2019 Shiinaha Cusub Naqshadeynta Shiinaha UC 200 Taxanaha 204 206 207 Gelinta Dhalista
Khadka Tooska ah ee Tooska ah ee Tareenka wata oo uu ku yaal ...
HGH toosan xajinta tooska ah ee loogu talagalay xirmada CNC HGH20CA
HGH toosan xajinta tooska ah ee loogu talagalay xirmada CNC HGH20HA